Farmaajo oo ku dhegan Saraakiil uu Sanbaloolshe ugu horeeyo | Dhacdo.com
Home Dhacdooyinka Farmaajo oo ku dhegan Saraakiil uu Sanbaloolshe ugu horeeyo
Farmaajo oo ku dhegan Saraakiil uu Sanbaloolshe ugu horeeyo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed C/laahi Farmaajo, ayaa ku dhegan Saraakiisha ammaanka ee dowladda, ka dib weerarkii habeenkii Khamiista lagu ekeeyay Hotelka Pizza House ee Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa tan iyo Khamiistii kulamo la lahaa Saraakiisha ammaanka, oo uu wehliyo Wasiirka Amniga Gudaha, Maxamed Abuukar Islow (Ducaale).
Dhinacyadan, ayaa waxay si dhow isaga wareysteen weerarkaasi iyo falcelintii ciidamada ammaanka, goobta lagu soo diyaariyay baabuurkii miineysnaa, ee weerarka uu ku bilowday iyo halka ay dableydaasi ka soo duulaan tagtey, intii aanay qabsan dhismaha Pizza House.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa waxaa uu si gaar ahi ugu dhegan yahay Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), C/laahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliyeed, General C/xakiin Daahir Saciid (Saacid).
Madaxweynaha, ayaa Saraakiishan ku haysta haddii ciidan gaar ahi loo sameeyay suggida amniga, sida ay raggaasi ugu suurtagasha in iyagoo gaari saaran soo dhex maraan wadooyinka bartamaha Caasimadda Muqdisho ku yaala iyo sida looga hortaggi kari waayay, haddii la kordhiyay ciidanka dharcadka ee ka hawlgala magaalada.
Sanbaloolshe waxaa lagu eedeynaya in uu ku fashilmay helidda xogta ku aadan abaabulka weerarkaasi iyo in uu ka gaabiyay digniin uu soo siiyo Taliska Booliska, haddii ay weerarkaasi ka hortaggi lahaayen.
General Saacid, ayaa isna waxaa lagu eedeynaya in ciidanka hoos-tagga, kuna sugan wadooyinka ku yaala bartamaha magaalada, ay barraha kontoroolada ku joojin waayeen baabuurkii is qarxiyay iyo baabuur kale, oo sida la sheegay ay la socdeen raggii weerarka soo qaaday. Baabuurkaasi waxaa la sheegay ka dib markii uu goobtaasi soo gaarsiiyay dableyda, in uu dib uga laabtay.
Inkastoo ciidamada ka hawlgala Xarunta NISA ay dadaal badani muujiyan, xilliyada qaarkoodna ay weeraro fashiliyan, ayaa waxaa hadana la rumeysan yahay inaanay gaarsiisnayn heerkii la doonayay.
Bulshada caalamka waxay aragti ahaan ka mideysan tahay inay adag tahay in laga hortaggo qof doonaya in uu is dilo, balse laga hortaggi karo goobaha lagu diyaarinayo weerarada qorsheysan, waa haddii uu jiro sirdoon xoogan.